Firefox Tumira: yemahara yakavharidzirwa faira yekugovana sevhisi | Linux Vakapindwa muropa
Nezuro, Mozilla yakaburitsa imwe yemapurojekiti ayo ekuyedza, Firefox Send, kune yekupedzisira vhezheni iyo inowanikwa kune veruzhinji.
Firefox Send ibasa riri nyore uye rakachengeteka rekugovana mafaira akanyorwa. Iyo sevhisi inotaridzika kunge yakapusa, asi injini inomhanya pasi payo inopa yechokwadi kumagumo-kusvika-kumagumo kunyorera, zvichireva kuti haifambise pachena mafaira chero kupi.
Mafaira akagovaniswa neFirefox Tumira sevhisi zvakanyatso nyorwa padivi revatengi (sender) uye yakatemwa pakombuta yemugashiri (JS mubrowser).
Saka mashandiro ayo anogona kutaridzika kunge akafanana neFirefox Sync, iyo inoshandisa kuvaka kwakafanana.
Iyo server kodhi inoitirwa paGitHub pasi peMPL 2.0 rezinesi (Mozilla Veruzhinji License), iyo inobvumidza chero munhu anoda kuita zvakafanana sevhisi pakombuta iri pasi pekutonga.
Para encryption, iyo Web Crypto API uye iyo AES-GCM block encryption algorithm inoshandiswa (128 mabits).
Kune yega yega kurodha pasi, kiyi yakavanzika inotanga kugadzirwa uchishandisa iyo crypto.getRandomValues ​​basa, iro rinoshandiswa kugadzira matatu makiyi: kiyi yekunyora faira uchishandisa AES-GCM, kiyi yekunyora metadata uchishandisa AES-GCM, uye kiyi yedhijitari siginicha kuratidza chikumbiro (HMAC) SHA-256).
Iyo yakavharidzirwa data uye iyo digitaini siginicha kiyi inoiswa kuseva uye yakavanzika yekumisikidza kiyi inoratidzwa sechikamu cheiyo URL.
Kana uchitsanangura password, kiyi yesiginicha yedhijitari inogadzirwa sePBKDF2 hash kubva pazita rakapinda uye URL ine chidimbu chekiyi yakavanzika (Iyo password inotsanangurwa nemushandisi inoshandiswa kuratidza chikumbiro, ndiko kuti, sevha ichangopa iyo faira kana iro password iri iro, asi iro password harishandiswe kunyorera.)
1 About Firefox Tumira
2 Ndekupi kwandinogona kushandisa iyo Firefox Send sevhisi?
About Firefox Tumira
Iyi sevhisi yakatanga kuburitswa muna2017 sechikamu cheiyo Firefox Bvunzo Pilot chirongwa, asi ikozvino Firefox Send yave kuita morphing muchigadzirwa cheMozilla yekuwedzera kupa. Panguva imwecheteyo, sevhisi yakagadziridzwa.
Firefox Tumira tsigira mafaera anosvika 1GB kune vashandisi vasingade kunyoresa vachiri sevhisi inogona kubvumidza kutumirwa kwemafaira anosvika ku 2,5 GB mushure mekupinda muakaunti yeFirefox.
Pamusoro pekupedzisira-kusvika-kumagumo kunyorera, mafaera akagovaniswa nebasa iri anogona zvakare kudzivirirwa ne password, pamwe nekugona kuita zvimwe zviviri zvinorambidzwa
Yokutanga ndeye huwandu hwenguva iyo iyo faira inogona kutorwa yakagovaniswa neFirefox Tumira isati yabviswa otomatiki.
Kumwe kudzvinyirira kunogona kuitiswa hupenyu hunobatsira hweiyi link inoenda kubva:
Nekukanganisa, pane muganho we1 kurodha uye 1 zuva. Ndokunge, kana iye anogamuchira asina kutevera chinongedzo chezuva rimwe, chinomiswa. Uye kana iwe uine, icharamba yakaremara.
Vagadziri vacho vanonyora kuti sevhisi yakanakira kugovana mharidzo kana mamwe mafaera ebasa nevavanoshanda navo.
Ivo vanongowana iyo yekubatanidza, tinya pairi uye kurodha pasi iyo faira, ivo havadi kuwana iyo account yeFirefox kana yakasarudzika crypto ruzivo (sekunge iwe wainyora faira nePGP uye uchitumira iyo kuburikidza neye mail).
Ndekupi kwandinogona kushandisa iyo Firefox Send sevhisi?
Iyo sevhisi inogona kushandiswa zvakananga kubva kune yako webhu bhurawuza mune iyo inotevera chinongedzo.
Nenzira, apo sevhisi yaive mubeta, yaive yakanyorwa yakavhurwa sosi CLI interface kunyora nyore mafaira kubva kumutsara wekuraira.
Iyo inokutendera iwe kuita inoenderana iyi maitiro uye zvisina musono kusanganisa mune ako ebasa maturusi.
Chirongwa ichi zvakare chinotsigira boka reanobatsira mabasa senge dura rezvinyorwa, faira nhoroondo, uye akasiyana mauto yekutakura (ndokuti, iwe unogona kushandisa yako sevha kana kubata, kwete iyo Mozilla server).
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti panguva ino kwave kutove neanoverengeka makore mhinduro ekugovana yakavharidzirwa mafaira, kusanganisira kubva kuMicrosoft.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Firefox Tumira: yemahara yakavharidzirwa faira yekugovana sevhisi
Indaneti yemahara yevose? Izvi zvinhu zvinorwadza zvakanyanya kuuya kubva kuMozilla. (Ndinogara kuCuba)
403. Iko kukanganisa.
Mutengi wako haana mvumo yekuwana URL / kubva kune ino server. Ndizvo chete zvatinoziva.